किशमिश ब्यागल्स, ब्रेकफास्टको लागि उत्तम घरेलु मिठाईहरू ThermoRecines
Desayuno290 मिनेट11 व्यक्ति250२ क्यालोरी
के तपाई घरको नास्ता तयार गर्न चाहानुहुन्छ? यी नोटहरू लिनुहोस् किशमिश बागलहरू किनभने तिनीहरू संग तपाईं सबैलाई चकित पार्न लाग्नु भएको छ।
संग बनेको छ बल आटा र ताजा बेकरको खमीर। सायद सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको उनीहरूलाई कसरी आकार दिने भनेर वर्णन गर्नु हो ... तर भाग्यवस, मैले तपाईंलाई तयार गरेको भिडियोमा देखाउन सक्छु। यो हेर्न रोक्नुहोस्।
भिडियोमा तपाईंले कसरी पिठो हाल्ने भनेर पनि देख्नुहुनेछ Thermomix मा र लेभाडो समय। यस अवस्थामा, एक चित्र एक हजार शब्दको लायक छ।
म तपाईंलाई यस प्रकारको अर्को विधिमा लिंक छोडछु जुन मेरो मनपर्नेहरू मध्ये एक हो: यो एंजेलिका वेणी.
1 किशमिश ब्यागल्स
केहि घरेलु रोलहरू बिहानको खाजा वा खाजाको लागि उत्तम।
आटाका लागि g० ग्राम पानी र किशमिश हाइड्रेट गर्न केहि बढी
१० ग्राम माल्ट
२ g ग्राम ताजा बेकरको खमीर
टुक्राहरूमा g० ग्राम बटर
हामी किशमिश थोरै तातो पानीमा भिजाउँछौं। दस मिनेट पछि हामी तिनीहरूलाई निकाल्छौं र रिजर्भ गर्दछौं।
हामीले गिलासमा दूध, पानी, माल्ट र खमीर राख्यौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, º०º, गति २.
हामी पिठो, अण्डा, माखन र नुन थप्दछौं। हामी प्रोग्राम २ मिनेट seconds० सेकेन्ड, स्पाइक गति.
ढलिएको किशमिश थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Seconds० सेकेन्ड, स्पाइक गति.
हामीले पिठोको भाँडामा हाल्छौं, यदि हामी चाहन्छौं भने पहिले फ्रिन्थ्यो।
हामी आटालाई बलमा आकार दिन्छौं, फिल्मले ढाकछौं, र यसलाई खण्डमा दुई घण्टासम्म बढ्न दिन्छ।
त्यस समय पछि हामी भाँडाबाट पिठो बाहिर निकाल्छौं र यसलाई फ्लोर गरिएको सतहमा राख्छौं। हामी यसलाई लगभग १० वा ११ भागमा विभाजन गर्दछौं र तिनीहरूलाई मुकुटमा आकार दिन्छौं (भिडियोमा देखिए अनुसार)। हामी पहिले गर्छौं प्रत्येक भागको साथ एक प्रकारको डोरी, त्यसपछि हामी यसलाई काट्छौं, यसलाई रोल्छौं र हामी डोनट गठन गर्नका लागि छेउछाउमा जोड्छौं।
ग्रीसप्रुफ कागजको साथ दुई बेकि tra ट्रेहरू लाइन गर्नुहोस्।
हामीले डोनटहरू ट्रेमा राख्यौं।
अण्डाको पहेंलो कुट्नुहोस् र प्रत्येक ब्यागेललाई थोरै कुटेको जर्सीले ब्रश गर्नुहोस्। हामी यसलाई लगभग १ घण्टा आराम गर्न दिन्छौं।
लगभग minutes० मिनेट को लागी १º०º मा बेक गर्नुहोस्।
थप जानकारी - एंजेलिका वेणी
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: आटा र रोटी, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » आटा र रोटी » किशमिश ब्यागल्स
स्वादिष्ट करी कुखुरा पक्राउ
झींगा र रातो रो संग रूसी क्रिसमस सलाद